DHAGEYSO:Shacabka Soomaaliya oo aragtidooda ka dhiibtay cayrinta ergayga qaramada midoobay. – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO:Shacabka Soomaaliya oo aragtidooda ka dhiibtay cayrinta ergayga qaramada midoobay.
Qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya oo warbahainta gudaha la hadlay ayaa siyaabo kale duwan uga hadlay arinta ku saabsan warqada ka soo baxday dowlada Soomaaliya ee ku aadan inuu sida ugu dhaqsiyaha badan dalka kaga baxo ergayga gaarka ah ee jimciyada qaruumaha ka dhexaysa u qaabilsan arimaha dalka Soomaaliya Nicholas Haysom.
Shacabka badankoodu waxay sheegeen in dowlada Soomaaliya ay xor u tahay arimaheeda gudaha waxayna qadaf ku Tilmaameen warqadii shalay ka soo baxday xafiiska mr Nicholas Haysom ee dowlada Soomaaliya looga codsaday inay Faahfaahiso shaqaaqooyinkii ka dhacay magaalada Baydhabo bartamihii bishii hore ee December.
Warka ka soo baxay xafiiska wasaarada arimaah dibada iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowlada fedraalka Soomaaliya ayaa xoghayaha guud ee Jimciyada Qaruumaha ka dhexaysa Antonio Guterres waxaa loogu sheegay inaysan dowlada Soomaaliya doonayn in wakiilka Gaar ka ah ee QM u qaabilsan arimaah dalka Soomaaliya oo wadanka ka sii sahqeeyo.
Qoraalkaas ayaa lagu sheegay in Wasaaradda arimaha dibada Soomaaliya oo xiganaysa heshiisyada caalamiga ee ku salaysan xiriirka diblomaasiyadeed, ay Dowladda Soomaaliya ku wargelisay Xoghayaha guud ee Q.M in wadanka laga rabin, uusana ka sii shaqayn karin Mudane Nicholas Haysom ergayga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arimaha dalka Soomaaliya.
Qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sidoo kale, lagu sheegay in danjire Heysom oo jabiyay qawaaniinta caalamiga ah ee madax banaanida dal, isagoo sidoo kalena fara geliyay arrimaha gudaha ee Soomaaliya sida ay sheegtay wasaarda ariamah dibada Soomaaliy.
Wasiirka arrimaha dibedda iyo iskaashiga caalimiga ee dowlada Fedraalka Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ku amray wakiilka gaarka ah ee xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomalaiya inuu si degdeg ah waddanka uga baxo, ka dib markii uu warqad ku aaddan rabshadihii ka dhacay magaalada Baydhabo u diray wasiirka amniga gudaha Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay inay muhiim tahay inuu ilaaliyo hanaanka Arrimaha gudaha Soomaaliya iyo Madaxbanaanida Soomaaliya, wuxuuna ku eedeeyya inuu dhowr jeer Sameeyay falal ka baxsan Sharciga Soomaaliya u degsan.
Hadalka Wasiirka ayaa kusoo beegmaya xilli Wasaaradda Arrimaha dibadda ay xalay Amartay Haysom in uu si deg deg ah dalka uga baxo dalka Soomaaliya.
← Gudiga doorashooyinka Puntland oo lagu dhawaaqay.
DHAGEYSO:xog’hayaha ururka macalimiinta Garissa oo ka hadlay shaqa joojinta ay qorsheynayaan Macalimiinta dalka. →